Maayarka Caasimada Oo Sheegay Inay Samaynayaan Diiwaan Gelin Iyo Tirakoob La Xidhiidha Guryaha Hargeysa | Araweelo News Network (Archive) -
Maayarka Caasimada Oo Sheegay Inay Samaynayaan Diiwaan Gelin Iyo Tirakoob La Xidhiidha Guryaha Hargeysa
Hargeysa(ANN)Shir lagaga hadlayay sidii kor loogu qaadi lahaa dakhli cashuureedka dawlada Hoose ee Hargeysa ayaa maanta lagu qabtay hoolka shirarka ee dawlada Hoose. Shirkaasi oo ay ka soo qeyb galeen Maayarka caasimada Hargeysa Eng. Xuseen Maxamuud Jiciir, Xoghayaha fulinta
dawlada Hoose Iyo Guddida dhaqaalaha ee golaha deegaanka Caasimada Hargeysa. Waxa ka hadlay Maayarka caasimada Hargeysa Eng. Xuseen Maxamuud Jiciir, oo ka waramay qorshe ay dhawaan dawlada Hoose fulin doonto oo lagu tirakoobayo Guryaha magaalada ee sharciyaysan iyo kuwa aan sharciyaysanayn.
Maayarku waxa uu sheegay in qorshahan ujeedadiisu tahay sidii ay u darsi lahaayeen guryaha bixiya cashuuraha ardiyada iyo kuwa aan bixin. “Qorshahan waxay ku ogaanaynaa dadkan isku dhex dhuumanaya ee qaarna cashuurta bixinayaan qaarna aanay bixinayn, Guri kasta waxa laga rabaa oo aanu u sii sheegaynaa inaad dadka idiin imanaya aad u fududeysaan waxay idin waydiinayaan ayaanu rajaynaynaa waxaanan idiin soo jeedinaynaa inaad cashuuraha idinku waajibay iska sii bixisaan,”ayuu yidhi Maayarku.
Waxa uu Maayarku u soo jeediyay hawl wadeenada dawlada Hoose inay si hufan u gutaan xilkooda. “Qorshahani sida uu u fulaa wuxuu inoo saamaxayaa inaynu sanadada dambe aynu si fudud u urursano cashuuraha, waxaan hawlwadeenada ka filayaa inaad xilkasnimo u qabataan shaqada sidii awalba aad u qaban jirteen. Dadweynaha waxaan ka codsanayaa inay cashuuraha iska sii bixiyaan tii ardiyadaha iyo tii liisamada meheradaha ay leeyihiin, meher kasta ama dukaamada yar yar ee magaalada ku yaala waxaan leeyahay iska sii bixiya cashuuraha intaanu ganaaxu idiin iman,”ayuu yidhi Eng. Xuseen Maxamuud Jiciir.
Maayarku waxa uu tilmaamay in wajiga hore ee qorshahan oo la bilaabi doono todobaadka fooda inagu soo haya laga xaafadaha Jameeco weyn ee degmada Maxamuud Haybe iyo Xero-awr ee degmada Ibraahim Koodbuur. Markaa ka dibna loo gudbin doono waaxaha kale ee caasimada Hargeysa.